Ogaden News Agency (ONA) – Cid kasta oo Guul Higsaneysa Waxaa Waajib ku ah inay Shuruudaheeda buuxiso, By-Xaaji M/rashiid
Cid kasta oo Guul Higsaneysa Waxaa Waajib ku ah inay Shuruudaheeda buuxiso, By-Xaaji M/rashiid
Guud ahaan dadyowga aduunku si guud aahaaneed iyo si gaar ahaanedba waxay higsanayaan guul waana mid ku abuuran shaqsi kasta manajiro ruux doonaya inuu dadaalkiisa ku khasaaro ama dib u dhac ku yimaado. Sububixii markuu waagu baryo ayuu ruux waliba juhdi ku dhaqaaqaa haday dhinaca dhaqaalaha tahay ama dhanka waxbarashada iyo wixii la mid ah-
Waxaa sidoo kale jira dadaalo waawayn oo kasocda guud ahaan caalamka waxaana asal u ah inay cidii wax haysata xoogga saarto siday u difaacan lahayd waxeeda isla markaana u siyaadsan lahayd horumar kale. Waxaa jira oo kale kuwo dulman oo la dhacay xaqoodii oo iyaguna u xusul duubaya siday xaqooda usoo dhacsan lahaayeen. Xikmad baa tidhaaha ninkii seexdaa sicii Dibi dhalay waa mid ay umaduhu wada adeegsadaan oo ficilkooda kawada muuqata inkasta oy soomaalidu si gaar ah u leedahay xikmadaas.
Geeska Afrika oo ah meesha uu dulmigu dhasha dhigtay ayaa noqotay meesha ree Ogadenya ilaahay ku askumay, Waxayna kamid noqdeen qowmiyadaha sida tooska ah loogu xad gudbay inkasta oyna waligood u rukuucin daalimiinta geeska afrika hagardaamada kawada magacay doonaamba ha sheegteene. Wax kasta oo loo dhaqaaqo oo ladoono in laga midho dhaliyana waxaa waajib ah in shuruudaheeda la buuxiyo.
Tusaale- hadaad doonto inaad Askari noqoto waa inaad badashaa dharkaaga caadiga ah ee suufka ka sameysan ood qaadataa midka qalafsan ee kaakiga ah, sidoo kale hadaad ahayd nin kabo Sandal ah iskaga xaragooda waxaa qasab kugu ah inaad xidhato kabo waawayn oo dhowr kiilo ah tababarkana u dhaga nuglaato adoo mar marka qaakood beerka iyo xusulada ku siqaya. Hadaadan shuruudahaas u hogaansamin majirto cid codsigaaga kaa aqbaleysa.
Hadaad bugto oo uu kula soo darso xanuun culus waxaa hubaal ah inay dantu kugu qasbi oo dalbanayso in cusbitaal lagu geeyo, hase ahaatee waxaa shardi lagaaga dhigayaa inaad liqdo kiniin qadhaadh ood cabto sharoobo qadhaadh isla mar ahaantaana aad Badhida dhiibato si laguu turqo. Waxaas oo dhan cidina majecla laakiin waa shuruudaha horyaala bukaanka ee ah inuu buuxiyo.
Hadaad doonto inaad reer sameyso waa inaad u hawl gashaa qaabkii aad reer u dhaqi lahayd rag iyo dumar kaa doonto noqee. Wiilka ayaa laga doonayaa inuu soo tabco hantidii uu ku hawl gali lahaa meesha gabadha laga rabo inay karti u leedahay agaasinka reerka gacanta loo galiyo ee marti iyo mudanaba leh. Waxaase ka wada dhaxeeya inuu mid waliba labiska iyo muuqaalka iska tiiriyo isagoo la jaan qaadaya kolba dharka casriga ah ee soo baxa. Sidoo kale waa in Qolkaagu noqdaa meel Barfuunada, Shanlooyinka, Shaambooyinka, Cadayada iyo Muraayaduhu ay dhex mayracanayaan. Dhalinyarka aan sidaa yeelin oon shurudahaas buuxinin waxaa ku adkaada inuu ku guulaysto reer sameynta.
Hadaad doonto inaad beeralay noqoto waxaa ku hortaala shuruuda ah- inaad Yaambada qaadato ama aad Cagafta korto ood ogolaato in boodhka iyo habaasku kaa galaan dhagaha, indhaha iyo Afkaba. Waa shuruudaha ku horyaala hadaad noqonayso beeralay.
Biyo meel godan isugu tagee, aan u dhaadhaco Jawharta Maqaalkani xambaarsantahay. Waxaan uga dan leeyahay waxaas oo dhan waa inaan keeno tusaale qanciya cida jecel xornimada Dalka Ogadenya. Hadaad kamid noqotay inta caqligoodu uu sida wanaagsan u shaqeynayo ee hanka wayn doonayana inay gaadhaan Guul iyo Xornimo taam ah, waxaa ku hor yaala inaad ogolaato, Dhimashada, Dhaawaca, Qaxa adigoo waliba huraya naf iyo maal waxaad awoodo, wax waqti ahna aadan qabsanin. Waa shuruudaha looga baahanyahay inay buuxiso cidii rabta inay Guul buuxda ka gaadho halgankeeda.
Gun iyo baar aan isu geeyo hadalka soona gunaanado anigoo leh- Xalka Dalkeena, Dadkeena iyo Diinteenuba waxay ku jiraan in la xoojiyo is garab taaga Ciidamada xaqlayaasha JWXO ee iyagu waa hore buuxiyay shuruudo halgameedka aan soo sheegay.